OnLeaks inosimbisa kuvapo kwe7GB iPhone 256 Plus | IPhone nhau
OnLeaks inoburitsa mufananidzo unosimbisa kuvapo kwe7GB iPhone 256 Plus
OnLeaks yadzoka munzira. Ino nguva haasati aburitsa mufananidzo wechero chinhu cheiyo iPhone 7 kana iyo iPhone 7 Plus, asi hongu izvo atumira chimwe chinhu chakanyanya kukosha. Icho chimwe chezvinamirwa zvinoenda kumashure / pasi pebhokisi reinotevera hombe smartphone yeapuro, iyo iPhone 7 Plus, uye mairi tinogona kuona akati wandei zvinhu zvinonakidza, kutanga nezvinoonekwa neziso rakashama: pachave a 256GB modhi.
Sezvo chinamirwa pa7GB iPhone 256 Plus chingaonekwa zvakakwana, tinogona kuona kuti bhokisi richava nei: zvine musoro, pachave neApple 7, asi chinotinakidza zvakanyanya ndechekuti ichasanganisira mamwe EarPods Mheni, ndiko kuti, mamwe maEarPods anozove akafanana neayo isu atakaziva asi ayo achange aine Mheni yekubatanidza iyo inosimbisa kubviswa kweiyo 3.5mm headphone port. Zvinotonyanya kufadza kana zvichibvira ndezvekuti hatizofanirwe kutenga adapta kuti tikwanise kushandisa mahedhifoni atinawo, sezvo ichi chinamirwa chinodaro pachave ne "Mheni kune Headphone Jack Adapter".
Iyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus ichauya iine Mheni-Jack adapta
Nehurombo, kubva kune ruzivo rwatinoona pane iyi 7GB iPhone 256 Plus chinamira hatigone kuziva kana tichigona kuchaja iyo iPhone panguva imwecheteyo isu tinoteerera kumimhanzi. Kugona kuita izvi, zvinenge zvichidikanwa kuti iyo iPhone 7 inogona kubhadhariswa neyakaiswa (kana zvisina waya) kana kuti iyo adapta iri mubhokisi inosanganisira chikamu chekubatanidza tambo iyo inogona kuchipa nesimba. Kana zvisiri, ndinotenda nemoyo wese kuti Apple ingadai yakanganisa kutaura zvisinganyanye kutsamwisa.
Kune rimwe divi, chimwe chinhu icho vazhinji venyu chamakatora sekurerutsa asi icho chingangodaro chisiri icho chakakoshawo: ichi chinamirwa Ini ndaizodzora Apple inotevera smartphone ichinzi iyo iPhone 6SE. Izvi zvinogona kunge zvakatariswa nekuti vamwe vaongorori vaifunga kuti Apple haizoshandisa nhamba nyowani nekuti haina kusanganisira akakosha dhizaini dhizaini.
Kusimbisa zviri pamutemo zvatinoona pane ichi chinamirwa uye mamwe makuhwa tichazofanira kumirira vhiki nemaawa mashoma. Muchiitiko musi waGunyana 7 tichaonawo kuti ndirini patinogona kutenga imwe yemidziyo mitsva. Uri kufunga nezve kutenga 7GB iPhone 256?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » OnLeaks inoburitsa mufananidzo unosimbisa kuvapo kwe7GB iPhone 256 Plus
Belkin anotsunga neDock yeApple Watch uye iyo iPhone
Iyo inofungidzirwa mitengo yeiyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus inosvinwa